Thwebula Avast 5.8.1 isizulu – Android – Vessoft
Avast Hambayo Security – a software for the ukuvikelwa eyinkimbinkimbi uhlelo kusuka amagciwane ahlukahlukene kanye malware. Avast Hambayo Security uhlola izicelo olufakiwe kanye nokuqukethwe inkumbulo idivayisi for izinsongo ahlukahlukene ukususwa kwabo okwalandela. Antivirus kuthola kuwukwephula ubumfihlo bokwaziswa kanye kwenza ukuvimba ukufinyelela ohlelweni idatha. Avast Hambayo Security iqukethe module ukuba Sinqanda ukufinyelela of izicelo internet enikeza ukuvikeleka idivayisi kusukela network izinsongo. Uma kwenzeka of ukweba umakhalekhukhwini, i-software kwenza ukulandelela ukuvimba ukufinyelela idivayisi. Avast Hambayo Security futhi likuvumela ukuba iqaphe umthamo traffic futhi aphathe izicelo kohlelo.
Ukuvikelwa system kusukela amagciwane kanye malware
Amasethingi of modes scan
Ikhono ukuvimba namakholi angenayo SMS
Blocks ukufinyelela idatha uhlelo
Sisingatha izicelo ezifakiwe
Amazwana on Avast:
Avast Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... AVG 5.2.0.1
English, Українська, Français, Deutsch... Pinterest 6.4
English, Українська, Français, Italiano... 9Apps 3.0.7.2